सधै नेपालको भलो चाहने जापानमा फेरी आइलाग्यो ठुलो स;ङ्क’ट ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सधै नेपालको भलो चाहने जापानमा फेरी आइलाग्यो ठुलो स;ङ्क’ट !
जापानका शिक्षामन्त्री कोइची हागिउदाले जापान सरकारले आगामी केही दिनमा देशैभरका विद्यालय ब;न्द गर्न लागेको जानकारी दिँदै त्यस समयमा घरभित्रै बस्न बालबालिकालाई आग्रह गर्नुभएको छ । को;रोना भाइरसको स”ङ्क्र”म;णको त्रा;समा जापान सरकारले पनि आगामी मार्च २ देखि देशैभरका विद्यालय ब;न्द गर्न लागेको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री कोइची हागिउदाले शुक्रबार सो जानकारी दिनुभएको हो ।
साथै उहाँले त्यस अवधिमा बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्कन भन्नुभएको हो । मार्च २ तारिखदेखि यहाँको सरकारले विद्यालय ब;न्दको कार्यक्रम राखेको छ । कोरोना भा;इ;रसको स”ङ्क्र”मणबाट बच्न जापान सरकारले यो नीति अख्तियार गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालयमा बालबालिकाका माध्यमबाट पनि प्रा;ण;घा;त;क यस भाइरसको स”ङ्क्र”मण बढ्न सक्ने अनुमान गरेर सरकारले यो नीति लिएको हो । शिक्षामन्त्री हागिउदाले भन्नुभयो– विद्यालय बन्द गरिएपनि बालबालिका खेल्न या अरु कारणले बाहिर जाने अवस्था भयो भने उक्त स”ङ्क्र”मणको प्रकोप फैलिने क्रम नरोकिन सक्छ, त्यसैले बालबालिकालाई घरमै राख्नका लागि सबैको सहयोगको आवश्यकता छ ।
यस कार्यका लागि बालबालिकाका आमाबुबाका साथै सबै मन्त्रालय र निकायको पनि सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा पनि उहाँले राख्नुभएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । कोरोना भाइरसको त्रास रहेको जापानमा पनि समूहगत रुपमा यसको स”ङ्क्र”मण फैलिने काममा विद्यालय पनि पहिलो खतराको सूचीमा रहेको विज्ञहरुले दिएको सुझावका आधारमा यो निर्णय लिइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । जापान सरकारले यही मार्च २ तारिखदेखि प्राथमिकदेखि माध्यमिकसम्मका सबै विद्यालय बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।
जापान सरकारले विद्यालय बन्दको यो कार्यक्रम अकस्मात ल्याएको बताइएको छ । यस विषयको कुनै तयारी यसअघि नगरिएको शिक्षा अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यसअघि कुनै छलफल नै नभएको यस विषयमा सरकारले बिहीबार अकस्मात निर्णय सुनाएको र त्यसको कुनै पनि तयारी नरहेको विद्यालय तहका शिक्षक र अभिभावकहरुले जानकारी दिएका छन् ।
विद्यालय बन्दको यस कार्यक्रमको सार्वजनिक घोषणा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री आबेले बिहीबार शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरुको बैठक बोलाएर विद्यालयहरु बन्द गर्न सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारको यही घोषणाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोगको याचना जापानी शिक्षामन्त्री हागिउदाले गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
कोरोनाको त्रा;सः जापानमा विद्यालयहरु छुट्टी, कन्सर्ट र पार्कमा भेला हुन प्रतिबन्ध टोकियो – प्रा;ण;घा;त;क कोरोना स”ङ्क्र”मणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन जापानमा एक महिनाका लागि विद्यालयहरु बन्द गरिएको छ । साथै बिटीएस कन्सर्ट समेतका सबै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु बन्द गरिएको छ भने मानिसहरु जमघट हुने ठूला कार्यक्रमहरुमा रोक लगाइएको छ ।
कोरोना स”ङ्क्र”मण रोकिनुको साटोे एसियादेखि युरोप हुँदै शुक्रबार अफ्रिकी उप–सहारा क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरु देखिएका छन् । जापानमा प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु बन्द हुँदा त्यसबाट झण्डै १ करोड ३० लाख बालबालिका घरमै बस्नु पर्नेछ । जापानमा आयोजना हुने गरी पूर्व तयारी गरिएका खेलकुद र सांगीतिक कार्यक्रमहरु र;द्द भइसकेका छन् । टोकियो डिज्नेल्यान्ड र टोकियो डिज्नेसी दुबै मार्चको मध्यसम्मका लागि बन्द गरिएको छ ।
कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा ९ नेपाली कै दीले पाए आममाफी